Wiki. Ny wiki dia fitaovana ahafahana mandavorary votoatinny
ⓘ Wiki. Ny wiki dia fitaovana ahafahana mandavorary votoatinny sehatra iray aminny tranonkala ka ahafahanny mpitsidika rehetra nomena alàlana hanova ny votoatinny ..
Ny Rindrankajy wiki dia rindrankajy voasokajy ao amin’ny sistema fitantanana votoatiny afahana manamboatra wiki, sehatra an-tranonkala azo tsidihina sy ovaina avy amin’ny alalan’ny rindrankajy fitsidihana pejy.
Wikipedia dia tranonkala iraisam-pirenena Web azo ampiasaina maimaimpoana. Wiki izany no foibe mitahiry ny pejy rehetra, ary ny sehatra Wikipedia no toerana fijerena sy fanovana ny pejy rehetra. Ny teny hoe Wikipedia dia fitambaranny teny roa wiki sy pedia. Ny Wikipedia dia nosoratanolona te-hanampy nefa tsy terena na karamaina.
Wikia dia sehatra mampiantrano tetikasa wiki maro noforonini Jimmy Wales sy Angela Beesley taminny taona 2004. Fitambarana tetikasa wiki marobe izay mampiasa rindrankajy MediaWiki izy io, ary ny orinasa Wikia, Inc. no mitantana azy. Maimaim-poana izy ho anny mpamaky sy mpitsidika, fa dokambarotra kosa no anangonany vola, koa hita aminny ankamaroanireo wiki ao araka izany ny AdSense. Malalaka ny sehatra ahafahana manokatra tetikasa wiki vaovao ao amini Wikia. Ankoatry ny hevitra hamorona tetikasa mety hifaninana aminizay efa iantsorohanny Tetikasa Wikimedia, izay anananny mpamorona ani Wiki ...
WikiNi dia rindrankajy malalaka wiki anankiray fehezinny lisansy BSD manome fomba tsotra, mahomby sy haingana ahafahana mamorona sy mitantana sehatra iray aminny tranonkala na amina tranonkala anatina orinasa iray. Maimaim-poana izy sady azo ovaina sy zaraina arakio lisansy mifehy azy io ihany koa.
WikkaWiki dia Rindrankajy wiki iray tena kely habe, fanaovana sehatra aminny tranonkala, nosoratana taminny PHP ary mampiasa banky angona MySQL hitehirizana ny pejy. Iray aminireo solofonilay rindrankajy WakkaWiki izy, fa nampiana singa maro hafa vaovao. Namboarina ho haingam-piasa, azo itarina ary azo antoka izy, ary ny lisansy GPL no anaparitahana azy.
DokuWiki dia rindrankajy wiki iray nosoratani Andreas Gohr taminny PHP ho fanampiana ireo orinasa mila fitaovana hanamboarana documentation. Tsy mila banky angona izy satria anaty rakitra teksta tsotra no tehiriziny ny votoatinny pejy. Mitovitovy aminny ampiasaini MediaWiki ny fitsipi-panoratana, izay tsotra nefa matanjaka ary azo antoka fa mety vakiana na ivelanny wiki aza. Ny GPL no lisansy mitondra azy.
Ny wiki dia fitaovana ahafahana mandavorary votoatinny sehatra iray aminny tranonkala ka ahafahanny mpitsidika rehetra nomena alàlana hanova ny votoatinny pejy ao anatiny. Manamora ny fiaraha-manoratra lahatsoratra ny wiki, koa rehefa olona maromaro no miara-mamolavola lahatsoratra iray dia tena ahitana tombontsoa ny mampiasa wiki. I Ward Cunningham no namorona ny wiki voalohany taminny taona 1995, taminny ampahanny sehatra iray miresaka momba ny programmation informatika, ary WikiWikiWeb no anarana nomeny anizany. Avy aminny teny hawaianina hoe wiki wiki, izay midika hoe "maikamaika" na "informel" no nahazoana ny teny hoe "wiki". Ampy fahamatorana ny wiki taty aminny taona 2000 ary efa nifandray taminny Web 2.0 ihany koa. Ny raki-pahalalana Wikipedia izay niforona ny taona 2001 no nanjary sehatra wiki be mpitsidika indrindra eran-tany.
1. Fiasany ara-teknika
Ny mampiavaka ny wiki aminny fitaovana fitantanana votoatin-tsehatra hafa dia mitovy ny fahafahanny olona tsirairay manana alàlana aminizany hanova ny votoatinny pejy, ary tsy voafetra ny fanovàna ataony aminizany kanefa tsy miteraka lesoka eo aminny sehatra aminny ankapobeny: afaka manitsy tsipelina iray diso na faingo tokana monja izy nefa koa afaka mamafa ny votoatinny pejy iray manontolo. Ao anatinny wiki dia namoraina ny famoronana pejy sy ny fanaovana rohy. Ny lasitra itoeranny votoatinny pejy izay misy ny fampahalalana ankapobeny sy mombamomba ny sehatra ihany no tsy afaka ovaina.
1.1. Fiasany ara-teknika Fanovàna
Ny mpivoivoy tranonkala mahazatra navigateur ihany no fitaovana ampiasaina hijerena sy hanovana ny lahatsoratra. Misy endrika roa no ahafahana mahita ny pejy: mijery fotsiny na ny fahafahana manova ny votoatiny. Aminny fanovàna ny pejy, dia miseho ao anaty fisy formulaire ny lahatsoratra. Miampy tetika fanoratra syntaxe vitsivitsy izany, izay antsoina koa hoe wikitext, ahafahana mamboatra ny endriky ny lahatsoratra, manisy rohy, manampy sary. Raha oharina aminny fango HTML dia mora ianarana kokoa io fomba iray io.
Misy koa anefa wiki vitsivitsy izay mampiasa interface WYSIWYG fa tsy wikitext.
1.2. Fiasany ara-teknika Fitantanana ny fanovàna
Tehirizinny wiki ny mombamomba ny fanovàna rehetra. Azo atao araka izany ny manaraka ny fivoaranny pejy anankiray, na ny manafoana fanovana anankiray ka mamerina ny lahatsoratra aminny endriny teo aloha. Azo arahi-maso ihany koa ny fandraisananjaranny mpitsidika. Farany dia aza atao koa ny manaraka indray mijery sy aminny fotoana rehetra ny fiainanny sehatra iray manontolo. Ireo fampahalalana rehetra ireo dia tehirizina ao anaty banky angona avokoa aminny ankapobeny.
Tsy ny pejy rehetra kosa anefa mazava ho azy ny azo ovaina, ary anisanny tsy azo ovaina ny pejy ahitana ireo fanaraha-maso ireo. Misy koa pejy hafa natokana ho anny mpitantana ihany, ka tsy afaka ovàna, toy ny pejy handinihana ny rohy, ny pejy mampifandray aminny système.
1.3. Fiasany ara-teknika Famantarana ny mpitsidika
Tsy voatery hoe afaka ovainny daholobe daholo akory ny wiki rehetra ; indraindray mety hotakiany ny fisoratana anaranny mpitsidika. Ary ho anny wiki misokatra ho anny daholobe aza dia misy teknika ampiasaina hiadiana aminny fanovana tsy irina.
Rehefa avelanny wiki iray manova ny votoatinny pejy ao anatiny ny mpikambana tsy misoratra anarana, dia ny adiresy IP-nilay mpitsidika no amantarany azy. Na izany na tsy izany dia azo atao ny manokatra kaonty sy miditra aminny alàlanny solonanarana sy tenimiafina.
2. Fiasany ho anny olombelona
Ny wiki iray misokatra ho anny daholobe dia karakarainny fiaraha-moni-mpitsidika na fikambananny mpampiasa azy mandavanandro, ary manatratra tanjona tokana ireo olona ireo. Raha vao misy fampahalalana miova, dia avy manara-maso anizay ny mpandray anjara mavitrika liana aminny pejy novaina, ary manitsy ny diso na manampy fampahalalàna raha ilaina. Araka izany, vetivety ihany dia hita sy voafafa ny fisomparana maro izay mety hisy hanao. Ankoatra anizay dia misy antanantohatra ihany koa ny fahefana anananny mpitsidika. Misy mpitsidika sasany manam-pahefana hamafa na hanidy pejy iray mba tsy ho azo ovaina intsony, na koa manakana ireo mpikambana tsy mitondra soa ho anny tetikasa. Aminny ankapobeny dia mora sy vetivety kokoa ny manafoana ny fisomparana anankiray noho ny herim-po sy fotoana lany nanaovana azy.
Ny fahombiazani Wikipedia dia maneho fa ny fiaraha-miasanny olona maromaro resy lahatra aminny tanjona iray dia ampy hahavitana sehatra wiki iray lehibe, tsara kalitao ary be mpitsidika. Nefa ireo sehatra wiki misokatra ho anny daholobe fa tsy ampy fanaraha-maso kosa dia vetivety dia lasibatry ny fisomparana sy ny spam.
3. Jereo koa
Lisitry ny rindrankajy Wiki
les wikis ont dix ans -- Jery todika momba ny taona 2005, nosoratanny mpampiasa wiki maromaro.
Fametrahana ny rindrankajy Mediawiki hanaovana sehatra wiki
Lisitry ny Wiki voakilasy araky ny hevi-dehibe
4. Wikis maro samihafa
Wiki aminny teny malagasy sy momba ani Madagasikara
Ny nahazoana ity lisitra ity dia nokarohina taminny fitaovana fikarohana sehatra izay sehatra ahitana ny teny hoe wiki, malagasy sy aminizany
fr) WikiThema glossaires thématiques et humoristiques
Web-Québec répertoire Web malalaka
WikiIndex -- wiki-nny wiki. Tarihini Mark Dilley, tetikasa iray hamoronana annuaire-nny wiki eran-tany, sokajiana araka ny toetra maro.
Rindrankajy wiki na motera wiki
Araka ny anarany, ny rindrankajy wiki dia rindrankajy ahafahana manao sehatra aminny tranonkala mifototra aminny wiki.
Fiaraha-moninny mpampiasa wiki
CraoWiki fikambanana lehibe anny mpampiasa wiki miteny frantsay
Meatball Wiki aminny teny frantsay
Sehatra ahitana fampahalalana momba ny wiki
leswikis.com Sehatra wiki iray ahitana fampahalalana momba ny wiki
PointWiki -- blaogy miteny frantsay ifarimbonana natokana ho anny vaovao momba ny wiki
4.1. Wikis maro samihafa Wiki aminny teny malagasy sy momba ani Madagasikara
4.2. Wikis maro samihafa Rakibolana Wiki
4.3. Wikis maro samihafa Rakipahalalana wiki
fr) Ekopedia tetikasa rakipahalalana mikirakira ny teknika aminny fiainana
fr) Wikiberal rakipahalalana liberal
fr) Kestudy: lesona maimaim-poana aminny taranja rehetra
fr) WikiKto rakipahalalana katôlika malalaka
fr) Enciclopedia Libre rakipahalalana espaniôla
fr) WikiF1 rakipahalalana natokana ho anny spaoro fiarakodioa sy ny familiana Formule 1
fr) GeneaWiki rakipahalalana momba ny firazanana généalogie
fr) Wiki Gamers rakipahalalana momba ny lalao stratejia
Jurispedia rakipahalalana momba ny fitsarana
en) Wowwiki rakipahalalana momba ny MMORPG World of Warcraft
4.4. Wikis maro samihafa sehatra wiki hafa
Wikipen aminny tenim-pirenena maro Atrikasa fanoratana ifarimbonana sy malalaka
Wikispecies aminny tenim-pirenena maro
WikiMapia: Système dinformation géographique
Wikibooks aminny tenim-pirenena maro
WikiPoll Wiki de sondages dopinion
Wikisource Tranomboky nomerika malalaka
Wikinsider mpitari-dàlana eo aminny sehatry ny hôtely, trano fisakafoanana, bar, club, fivarotana
fr) Wikituto.org tutoriaux
Unplugged Café wiki miteny frantsay voalohany miresaka ny gitara
4.5. Wikis maro samihafa Rindrankajy wiki na motera wiki
4.6. Wikis maro samihafa Fiaraha-moninny mpampiasa wiki
4.7. Wikis maro samihafa Sehatra ahitana fampahalalana momba ny wiki
4.8. Wikis maro samihafa Sehatra anglisy
en) Wikimatrix: sehatra ahitana fampitahana rindrankajy wiki fampitahana rindrankajy wiki mihotra ny 20
en) Annuaire dmoz.org
en) Codepedia wiki natokana ho anny programmeur
en) wiki voalohany indrindra
en) MeatballWiki iray aminireo wiki lehibe indrindra
Ny skin Voasintona Fijerena Hamaky Hanova ny fango Hijery ny tantara Plus Tadiavo Fitetezana ny wiki Fandraisana Wikipedia finday Pejy rehetra Pejy vaovao Pejy kisendra Fikambanana Toerana iombonana Niorina taminny 1961 izy io nataoni John Galardi.